Resabe tsy nihinanan-kanina !
Izahay izao no eto, hoy ilay tompon’andraiki-panjakana iray izay nialoha kelin’ny niandohan’izao fipariahana valanaretina eto Madagasikara izao. Toa
Fahamaizana avo lenta
Mety tsy tena niteraka resabe loatra na dia mampiahiahy ihany aza ny fahamaizan’ireo trano hazo nisesisesy teto an-drenivohitra.
Hajao ny fepetra
« Sorena kely aho miresaka aminareo androany, mba tsy hitenenako hoe sorena be” Ampahan-tenin` ny Filoha Rajoelina raha nanatrika ny fanaovana fitiliana faobe ny tsimokaretina COVID-19 tany Toamasina ny 07 mey lasa teo
Ny omaly tsy miova
Samy niandry izay ho valan-dresaky ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina ny vahoaka Malagasy omaly hariva.
Tsy toa teny, very ny fahatokisana
Tena ilaina amin’ny fitondrana ny firenena, amin’ny fifampitondrana ao anaty fiarahamonina, amin’ny fitantanana orinasa,…
Mirary ny soa tokoa
Mirary ny soa tokoa manoloana izao ady hatrehin’ny firenena sy izao tontolo izao izao.
Tsy mifidy saranga
Vanim-potoana isan’ny mafy teto Madagasikara ny nisian’ny valanaretina pesta tamin’ny fanjakana Rajaonarimampianina. Somary nosokajiana ho aretin’ny mahantra sy ny sahirana satria noho ny loto sy ny fako rahateo no isan’ny nampirongatra azy.
Telo volana latsaka herinandro izay no nilazan’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina ny 8 aprily 2020, fa hisy ny fanisam-bahoaka hametrahana ilay antsoina hoe: “digitalisation”
isaky ny fokontany ho an’ireo fokontany amin’ny faritra miisa telo, dia Analamanga, Antsinanana, ary Matsiatra Ambony. Nolazaina, fa hizarana solosaina ny fokontany tsirairay, ary hahazo “carte magnétique” ny olona hirakitra ny mombamomba ny olona, ny fari-piainany,... Ny Banky Iraisam-pirenena no namatsy izany, ka ao anatin’ny folo andro no hanaovana an’io, hoy i Andry Rajoelina. Fokontany maro no nohantonina sy nanamarinana raha efa nahazo solosaina, fa mbola tsy misy an’izany any. Vao ny 14 jona teo ihany koa no nilaza ny filoha fa hisy ny fizarana sakafo maimaimpoana antsoina hoe “kaly tsinjo” na “kaly Mora” ho an` Antananarivo, Toamasina, Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Bekily, Amboasary, Betroka, Ampanihy,... ary ao anatin’ny tapa-bolana io raha ela indrindra, dia hatomboka. Dila ny tapa-bolana izay efa manatombo andro vitsy ka asa na efa manomboka na mbola mijanona ho fampanantenana, toy ny solosaina isam-pokontany na ahoana? Tena sahirana ny vahoaka kanefa somary mirona betsaka any amin’ny zavatra avo lenta tsy ahitam-bokatra vetivety sy hahavonjy ny besinimaro ao anatin’ny fahasahiranana ny fitondrana, fa tena tonga any amin’ilay hoe resaka tsy hihinanan-kanina. Matin’ny hanohanana ihany izay ho fatin’ny hanohanana, fa ny an’ny fitondram-panjakana toa zavatra hafa mihitsy no maha maika. Tsy ratsy ireny, saingy mila jerena ihany hoe inona no maika sy hanavotana ny fahasahiranana ara-tsosialy sy ara-toekarena izay potika sy rava? Ny valanaretina tsy voafehy, ka mitombo ny horohoro. Marina fa milaza ny hamerina ny tsena mora sy ny vatsy tsinjo, saingy mifanentana amin’ny filan’ny rehetra ve ireny? Nahoana no tsy aloha ny trosa amin’ny Kaompanian-tsolika dia ampidinina ohatra ny vidin-tsolika? Samy manana ny manahirana azy tokoa angamba e?